राजपरिवारका सदस्यलाई थुन्न पाँचतारे होटललाई नै बनाइयो जेल ! - Naya Pusta
राजपरिवारका सदस्यलाई थुन्न पाँचतारे होटललाई नै बनाइयो जेल !
Naya Pusta २०७४ कार्तिक २२ November 8, 2017 गते प्रकाशित
साउदी । भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरिएका ११ साउदी राजकुमारलाई थुन्नका लागि एउटा पाँचतारे होटललाई नै जेल बनाइएको छ। साउदी अरबमा हालै त्यहाँका ११ राजकुमार, चार वहालवाला मन्त्री र दर्जनौं पूर्वमन्त्रीलाई पक्राउ गरिएको थियो।
पक्राउ गरिएका ११ राजकुमारलाई पाँचतारे होटल रित्ज कार्लटनमा राखिएको छ। सो होटललाई नै अहिले राजपरिवारका सदस्य थुन्ने जेल बनाइएको हो। यो होटलमा साउदी सरकारले आफ्नो मुलुकको भ्रमणमा आउने विदेशी विशिष्ट अतिथिहरु राख्ने गर्दथ्यो।
किंग अब्दुल्लाजीज कन्भेन्सन सेन्टर नजिकै रहेको यो होटलमा ६ रेस्टुरेन्ट, इन्डोर स्वीमिङ पुलसहित विभिन्न सुविधा छन्। युवराज मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वमा गठित भ्रष्टाचारविरुद्धको नयाँ कमिटीले ११ जना राजकुमार, चारजना बहालवाला मन्त्री र दर्जनौं पूर्व मन्त्रीलाई गिरफतार गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा ट्वीटर र एप्पलमा लगानी रहेका राजकुमार अलवालिद बिन तलाल पनि छन् । एजेन्सी
बाढीका हृदयविदारक तस्वीर : पुर्ने ठाउँ नभएपछि मृत बालकलाई बाढीमै बगाइयो
मालिकको मृत्यु भइसक्यो, कुकर ८ महिनादेखि अस्पताल बाहिर कुरिरहेछ
भारतीय जी टेलिभिजनको प्रख्यात कार्यक्रम डान्स ईन्डियामा धुम मच्चाएकी नेपाली छोरी तेरिया फौजा मगर